"Miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina."Romana 12:2
Matetika, eo amin’ny fiainako, io teny tsotra io dia milaza fa misy ezaka tokony hataoko, iatrehana ireo sorisory, na fahasahiranana, na fizahan-toetra. Manoloana ireo safidy sy adidy mameno ny fiainako, dia tsy mora mandrakariva ny manaiky fa hisy toe-javatra, toy ny fotoanan’ny fahanterana, ohatra, izay tsy maintsy anekena fa tsy azo ihodivirana ny fihenan’ny hery, ka mitondra amin’ny fahafatesana.
Ho an’ny kristiana, ny hoe manaiky, dia mankatò an’Andriamanitra; mihevitra fa ireo tranga eo amin’ny fiainantsika, na dia ireo toa ratsy aza, dia Andriamanitra no namela na nandidy azy ireny hiseho. Manaiky koa fa na inona na inona mitranga, dia ny tanan’ny Tompo no miasa, ary “tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra” (Marka 7:37). Angamba isika mailaka er? hihevitra hoe: “Voaongotra ny fikasako, dia izay hevitra fikirin’ny foko indrindra” (Joba 17:11), na hiteny tahaka an’i Jakoba hoe: “Izaho ihany no zoin’izany rehetra izany” (Genesisy 42:36). Tsy fantatr’io patriarka io fa Andriamanitra dia nanomana fampitoniana goavana ho an’ny fony naratra: ho hitany indray i Josefa, ilay zanany noheveriny ho efa maty…
Matoa isika mionona, dia satria mahazo antoka fa mahafantatra sy mandrefy izay rehetra fijaliantsika ny Raintsika any an-danitra, ary miara-mitondra izany amintsika. “Tamin’ny fahoriany rehetra dia niory koa Izy…; ny fitiavany sy ny famindrampony no nanavotany azy sy nivimbinany azy ary nitondrany azy” (Isaia 63:9).
Aoka isika hianatra hanaiky fa ny toe-javatra mampangirifiry lalovantsika dia avy amin’Andriamanitra, ho resy lahatra hoe “ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra” (Romana 8:28).